बण्डापत्रको भण्डाफोर - Fitkauli
एउटै नालीको हिलो, एउटै फिलोको पिलो, एउटै गुरुद्वारा शिक्षित, एउटै मन्त्रले दीक्षित हामी दुई भाइको नाम मात्र फरक छ, काम एउटै हो ।
लिखितम् आगे अज्ञात बाउको वीर्यस्खलनबाट आविर्भूत हामी दुई दाजुभाइ निक्खर नेपालीको नाताले तिक्खर प्रजातन्त्रको स्वाद चाखेर अल्छी तिम्रो ठटाएर स्वादी जिब्रो फड्कादै थियौँ । खाँदाखाँदा हाम्रो निकै फुर्ती बढ्यो । जनबलमा कमजोर भए पनि धनबलमा कोहीभन्दा कमी छैनौ । अघोषित बाजेको नाति अज्ञात बाउको छोरा, जेठो फाइँफुटे कान्छो भाइफुटे दुई दाजुभाइको मिलापमा दरिद्रको खिलाप उत्रिएर पूर्व मेची, पश्चिम महाकाली, उत्तर चीन र दक्षिण भारत यति चार किल्लाभित्रको भूभागमा नेपाल बन्द र चक्का जामको खेती गरी हामी दुईले सैतानको नाममा रैतान कायम गरेका छौं । हामी बाहेक अन्य कसैको हकभोग लाग्ने छैन । लागे सडक आन्दोलन र चक्का जामको सम्पूणर् अधिकार हामीमा सुरक्षित रहने छ । बाउको ठेगान नभए पनि हाम्रो माउ एउटै हुनाले एउटै कोखबाट भयौँ र एउटै गल्लीमा चर्‍यौँ । चर्नु र भुँडी भर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । भविष्यपर्यन्त एक भएर चर्ने छौं । यसमा विवाद हुने छैन ।
एउटै नालीको हिलो, एउटै फिलोको पिलो, एउटै गुरुद्वारा शिक्षित, एउटै मन्त्रले दीक्षित हामी दुई भाइको नाम मात्र फरक छ, काम एउटै हो । भिन्नजस्तो देखिने विशेष चिह्न केही छैन । अलक जगाउनेकै खलक हौं । बाहिर जति मिलाप गरे पनि भण्डाराको खिलाप कपटविनाको छिनाझपट हुन्छ । भागशान्ति जिन्दाबाद भन्दाभन्दै हाँडीघोप्टे मोराहरू कपटबिनाको छिनाझपट गर्छन् । जोसाजोस र खोसाखोसमा कसैले भातैभात खान्छन् त कसैले लातैलात खान्छन् । कसैले दाल मात्रै खाएर थालमै तुर्क्याउने र भान्छेलाई घुक्र्याउने पनि गर्छन् । कसैले तरकारी मात्रै थुपार्छन् । तरकारी पनि नपाउनेले रित्तो थाल उफार्छन् ।
प्रजातन्त्रको नाममा जति खान सक्छौ खाऊ भनेर ढुकुटी सुम्पिदिँदा पनि भाइभाइमा तानातान र हानाहान गर्छन्, हन्तकाली मोराहरू । अरूको वास्ता नगरी आफ्नो मात्र भुँडी भर्न पाए पुग्यो । मिलेर खाने सद्बुद्धिको अभ्युदय
कसैमा भएन । खगोलको नक्षेत्र मिल्ला सगोलको भान्छा मिलेन । भान्छाभन्दा पनि भान्छामा बस्ने कान्छा मिलेनन् । बेग्लै बस्न पाए ठूलै भाग पाइएला भनेर मरिहत्ते गरे । मेलमिलापको खिलाप ताराबाजी ठोकेर नाराबाजी लगाए । एउटा घरबारमा हामी दाजुभाइ छुट्टाछुट्टै दरबारमा बस्न बाध्य भयौँ । बण्डापत्रको भण्डाफोर नगर्ने सर्तमा सिंहदरबार सगोलमा राखेर बल्खु दरबार र सानेपा दरबार खडागरी हाम्रो मनोमान खुसीराजीसँग भातभान्छा छुट्टिएको ठीक साँचो हो । पछि हामी एकाघरका हौं भनी एक अर्काले स्रोत नखुलाई जस्केलाबाट भित्र्याइएको सम्पत्ति दाबी गर्ने छैनौं । राष्ट्रियताको खिल्ली उडाएर न्यायका लागि दिल्ली चलो भन्ने छैनौं । भने यसै लिखतले बदर गरिदिएमा हाम्रो मञ्जुर छ । हाम्रो यो ऐतिहासिक विभाजन राजनैतिक आस्थाका कारण नभै नास्ताका कारणबाट भएको हो ।
स्मरण रहोस्, हाम्रो गाँसवास मात्र छुट्टिएको हो । गर्धन छुट्टिएको छैन । परिआएको खण्डमा दाइको गर्धन माथि भाइको गर्धन भाइको गर्धनमाथि दाइको गर्धन हुने छ । तेरोमेरो भन्ने सङ्कीणर्ता रत्ति पनि हुने छैन । हामी भावनात्मक रूपले एक छौं । चलअचल जायजेथाको त कुरै छाडौं शारीरिक बेथा समेत एकै प्रकारको लाग्ने गरेको छ । हामीलाई विसन्चो हुँदा पनि सुस्ता दुख्दैन दिल्ली दुख्छ । हाम्रो एकताको बखान गर्यो भने उखान जस्तो हुन्छ । एकपटक अविश्वासको प्लेग संसद्भित्रै फैलियो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हामी एकभएर सङ्क्रमितलाई आफ्नै मीत सम्झेर रातारात बैङ्कक कुदायौं । साथीहरू मरेर नजानु र सङ्कट टरेर जानु हाम्रो अहोभाग्य हो । ज्युदै फर्किए । तिनिक्क हातगोडा तानेर फुस्रो आँखा पल्टाइसकेका थिए । हैजा पीडितलाई बैङ्कखतिर लैजा भनेर आकाशवाणी नभएको भए भाइहरूको प्राणपखेरु उड्थ्यो । उमेर ढल्कन नपाउँदै कालपल्कन लागेको देखेर उपचार गर्न पठायौं । धन्न बच्यो । यसमा हाम्रो सदाशय बाहेक अन्य कुनै स्वार्थ लुकेको छैन । स्वार्थवश काम गरेको भए त हाम्रा लागि ज्यान दिने खसीबोकाहरू प्रति पो ध्यान दिन्थ्यौं । सन्तोषी हुनाले आफै चर्न जान्छन् । विद्रोहको स्वर सुन्नु परेको छैन । बूढीबाखीहरू हरियो घाँस खान खोज्छन् । राजनीतिको सुक्खा बालुवामा पालुवा आउन सकेको छैन । के खान दिनु । हरियो घाँसको साटो हरियै चस्मा लगाइदिएपछि सुकेको पराल चपाएर बस्छन् । पेट भरेर टन्न अघाएपछि जातभातको भेदभाव नराखी बोकाको बाउ र थुमाको माउ आपसमा मिलेर अन्तरजातीय भ्यालेन्टाइन डे मनाउँछन् । अन्तरजातीय सम्बन्ध जोडेर बूढो बोकोले तन्नेरी धोको फेरे देख्दा सुषुप्त रूपमा मभित्र लुकेको पवित्र भावना पनि जुर्मुराउँछ ।
बोको भनेर के गर्नु, हाम्रो मनको यथार्थ कुरा बुझेर काम गर्छ । प्रत्येक निर्वाचनमा डालेघाँसको पाले छनोट गर्दा यिनै बोकाहरूले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्छन् । निर्धनको गर्धन भाँचेर भए पनि हाम्रो अभियानलाई सफल तुल्याउँछन् । डेढ दुई वर्षमा भइरहने मध्यावधि चुनावमा पनि त्यसै गरी ज्यान फालेर सहयोग गर्छन् । उसै त सिंघौरी खेल्न रहरगर्ने बोकाहरू इशारा पाएपछि किन पछि हट्थे फरियाको कन्दनी कस्ने भरियाहरू हामीलाई विजय माला पहिऱ्याउन सफल हुन्छन् ।
जुधाजुध गर्दा ज्यानको प्रवाह राख्दैनन् । कसैको हड्डी टुट्छ त कसैको टाउको फुट्छ । कसैको खुर फाटिन्छ कसैको पुच्छर काटिन्छ । बाख्रीको पुच्छर काटिएको देखेर अङ्गभङ्ग भएको बोको पनि दङ्ग पर्छ । अनि हामी चेतनशील दाजुभाइ बीच केको दुश्मनी । पहिला घरसल्ला गरेर पछि सडकमा हल्ला गर्छौ । आन्दोलनको साझा एजेण्डा भनेकै यही त हो नि । त्यसैले हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौं- तिमी टेबुल फोर, म कुर्सी भाँच्छु । तिमी नदीनाला बेच, म कार्लमाक्र्सको छाला बेच्छु । म सहमतिको मादल बजाइटोपल्छु, तिमी असहमतिमा नाचीटोपल । जतिजति दर्शकहरूले ताली बजाउँछ उतिउति नाचीटोपल । पालैसित कहिले तिमी नाचीटोपल कहिले म नाचीटोपल्छु । अख्तियारले भाँच्न नसकेको कम्मर हामी आफै भाँचेर नाचिदिऊँ । नाच्दानाच्दै म द्रौपदीको सारी तान्न जान्छु, तिमी भीष्मपितामहको दारी तान्न जाऊ म पुनः पाण्डव नृत्य गर्छु तिमी ताण्डव नृत्य गर ।
नृत्यको पारिश्रमिक बापत चलनचल्तीका मोहरूले खल्ती भरेको देखेर डाढो गर्नेहरू हामीतिर ठाडो कान पारेर हेर्छन् । हेरे खाँचैसित, हाम्रो मन मिलेको हुँदैछ । हिसाबकिताब मिलेपछि मन त त्यसै मिलिहाल्छ नि । हामी दुई दाजुभाइका रोहवरमा बाँडीचुडी खाउँला । कहिले पो नखाएको हो र । पहिलादेखि नै खाएकै त हो नि । मदन कमरेडको बर्खीपछि महाकाली सन्धिको थर्की फिंजायौँ । हामी दुईबीच मैत्रीपूणर् खेल भयो । त्यो बेलामा पनि मज्जासित भुँडी पड्काइहाल्यौ नि । तिमी बाठो भएर भाङ नखाइकन आङ तानीतानी पोट हान्नेतिर लाग्यौ मचाहिँ भोट तान्नेतिर लागें । त्यतिखेर तिमीलाई अलिअलि मर्का परेको थियो । त्यसको सोधभर्ना त लाउडाको क्यासिनोमा कौडा खेल्दा बक्खुमा च्याँखे थापेर लक्कु कुम्ल्यायौ । तिमी जेल जानु परेन । तिम्रो सात पुस्तालाई पुगिसक्यो । त्योभन्दा अरू के चाहियो । त्यति नगरुन्जेल त संसददेखि सडकसम्म उधुम मच्चाइहाल्यौ नि, बाघे ! भाग्यमानी रहेछौ चाँडै नै आर्थिक सफलताको शिखर चुम्न पायौ । असी नब्बे लाखको प्राडो चढेर घुम्न पायौ यो कुरा सत्य हो मैले दोहोऱ्याइ तेहऱ्याइ भनिरहनु पर्दैन । सबैले जानेको ३ बेहोरा ठीक साँचो हो । झूटा ठहरे कानुन बमोजिम सहुँला बुझाउँला बुझाइन र आलटाल गरेँ भने भाइ मारेको हत्ते लाग्ने छ ।
कठैबरा मेरा निरीह भाइहरूलाई मार्नैपर्ने अवस्था नपरीकन त्यसै मार्थेँ । कसैलाई आँखामा राख्छु, कसैलाई काँखमा राख्छु । कसैलाई फकाउँछु, कसैलाई फुल्याउँछु । भागशान्ति पस्किएर दिँदा ठस्किएर अशान्ति मच्चाई भित्तामा लगेर अचेट्छु । अचेट्दा पनि नटेर्नेलाई दासढुङ्गामा लगेर घचेट्छु । यसरी घचेट्दा हामी मध्ये जसले घचेटे पनि हत्याको अभियोग लाग्ने छैन । फटकेमा लेखिएका पटकेहरू साक्षी किनारा सदर ।
श्यामबहादुर लामा प्रकाशित मिति : वैशाख १३, २०७९
उम्मेद्वार महोदय !!
देश गनाउने जाँडका घ्याम्पाहरू
श्यामबहादुर लामा का थप सामग्री
कालेकाले मिलेर खाऊँ भाले
हास्यव्यङ्ग्य कविताका चारवटा फाँकी
बम बम भोला !!!
गोरु अब सङ्घर्षको मैदानमा